Ciidamada Somalia iyo kuwa Mareykanka oo weeraray Al Shabaab – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Ciidamada Somalia iyo kuwa Mareykanka oo weeraray Al Shabaab
Tuuryare 10 March 2019
Maamulka Gobolka Shabeellaha Hoose ayaa faah faahin ka bixiyay howlgallada Ciidamada Kumaandoosta Soomaaliya iyo kuwa Mareykanka ka fuliyaan deegaanada Al-Shabab ay kaga sugan yihiin gobolkaas.
Guddoomiyihii Gobolka Shabeellaha Hoose ee shalay xilkaasi laga qaaday Maxamed Ibraahim Barre ayaa sheegay in Ciidamada Dowladda iyo Saaxiibadooda taageeraya ay howlgalladii ugu dambeeyay ay ka fuliyeen Gobolkaas ay ku guuleysteen inay bur buriyaan Xarumo ay lahaayeen Al-Shabaab.
Maxamed Ibraahim Barre Guddoomiyihii Gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxa uu hadalkiisa intaasi ku daray in Ciidamada Kumaandoosta Soomaaliya ay sidoo kale weeraro cir iyo dhul ah ay ku qaadeen Saldhigyo Ururka Al-Shabaab ay kaga sugnaayeen deegaanada, Awdheegle, Bariira, Janaale, Tuulada Dacare iyo Kuunya Barrow.
Waxa uu sheegay in deegaanada howlgalka laga fuliyey lagu dilay Xubno ka tirsan Shabaab oo qaraxyo diyaarinayay sidoo kalena la bur buriyey Xarumo ay Gaadiidka lacag uga qaadi jireen sida uu hadalka u dhigay.
Marka laga soo tago hadalka kasoo yeeray Guddoomiyihii Gobolka Shabeellaha Hoose majiraan Al-Shabaab dhankooda wax war ah oo kasoo baxay kaas oo ku aadan Xarumaha Mamulka Gobolka Shabeellaha hoose ay sheegeen in laga bur buriyey.
Ethiopian airlines crushes, 157 on board
Arday lagu dhex dilay Iskuul ku yaalla Baladweyne